Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » प्रधानमन्त्रीले प्रवासी नेपालीसामु यसरी बोले झुट, निर्वाचन आयोगले पार्यो प्रष्ट
प्रधानमन्त्रीले प्रवासी नेपालीसामु यसरी बोले झुट, निर्वाचन आयोगले पार्यो प्रष्ट
प्रवासी नेपाली मञ्चका कार्यकर्तालाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेपाल पक्षको निवेदन रित नपुगेको भनेर हिजो फिर्ता पठाएको बताएका थिए ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निवेदन फिर्ता नभएको बताए । उनले भने– ‘कसले भन्यो आयोगमा आएको निवेदन फिर्ता भयो भनेर ? दर्ता भएको निवेदनपनि फिर्ता हुन्छ ?’ उनले प्रधानमन्त्रीले भाषणका क्रममा के भने सो थाहा नभएको र आयोगले फिर्ता गर्ने कुरा नभएको उनले बताए ।
उनले भने– ‘भाषणको कुरा सोधेर नी हुन्छ, मानिलिँउ तपाईले हामीलाई अहिले एउटा निवेदन दिनुभयो भने के त्यो फिर्ता हुन्छ ? कहाँ फिर्ता हुन्छ ? आयोगमा आएर दर्ता भएको चिज रहिरहन्छ ।’
यता दाहाल-नेपाल पक्षले पनि आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको कुरालाई अश्वीकार गरेका छन् ।
उनले बिहीबार मात्रै निर्वाचन आयोगले सम्पर्क गर्नुपर्ने नेताहरूको नामावली बुझाएर आफूहरू फर्किएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गलत बोलेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले फिर्ता होइन केही पनि पठाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नुभयो । हिजै निर्वाचन आयोगमा हामीले अनुसूची १८ अन्तर्गतको विवरण बुझाएका छौं ।
नाम, झन्डा, पदाधिकारीको नामावली फेरबदल भएको भए अपडेट गर्ने भन्ने छ त्यसका लागि हामीले सूचना दिन गएका थियौं । पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाएर केन्द्रीय सदस्य कायम राख्दै माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चुनिएको कुरा अपडेट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी सूचना दिएर फर्कियौं । हामी त्यहाँ रातभर बस्ने त कुरा हुँदैन । हामी फर्केकोलाई फर्काएको रूपमा बुझेको भए केही भन्नु छैन ।’
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि दुई पक्षमा विभाजन भएको नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्नो आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । त्यसमाथि छानविन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति January 1, 2021